पहिला मधेसीको माँग पुरा हाेस अनि चुनाव – नेता राजेश मान सिंह - Yatra Daily
Home बिचार/अन्तर्वार्ता पहिला मधेसीको माँग पुरा हाेस अनि चुनाव – नेता राजेश मान ...
पहिला मधेसीको माँग पुरा हाेस अनि चुनाव – नेता राजेश मान सिंह
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका केन्द्रिय नेता राजेशमान सिंह संग संग स्थानिय निर्वाचन बारे गरेका संक्षिप्त कुराकानीका अंशहरु :
प्रश्न नं.३. वीरगंजको मेयरमा तपाईको पहिले देखि नै खुवै चर्चा आईरहेको थियो । पार्टी एकिकरण पश्चात तपाईको मेयरको सम्भावना कतिको छ ?
अहिले त राजपा नेपालले चुनावको च पनि उच्चारण गर्न चाहदैन । जब सम्म मधेसको माँग संबिधानमा सुनिश्चित हुदैन तब सम्म हामीहरु कुनै चुनावमा जादैनौं । तर्सथ म मेयर वा को मेयर हुने भन्ने हाम्रो ध्यान केन्द्रित छैन । हाम्रो काम एउटै हो मधेसको माँग संबिधानमा सुनिश्चित हुनुपरयो । भोलीका दिनमा मधेसको माँग सुनिश्चित भयो भने पार्टीले मुल्याँकन गरी टिकट दिन्छ भने कुनै चुनाव होस म पछाडि हटदिन म आफनो जिम्मेवारी पुरा गर्छु ।
म मधेसी जनतालाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु अहिले खास गरी देशको चौथो अंग भनेर चिनिने बिशेषगरी राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकाहरु , सोशल मिडिमा आउने समाचारहरुले मधेसी नेताहरुको बिषयमा र राजपाका केन्द्रिय नेताहरुको बिषयमा जुन भ्रामक खबरहरु फैलाइरहेको छ त्यसको पछडि नपर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथै एउटा कुरामा एकदमै मधेसी जनतालाई ढुक्क हुन अनुरोध गर्दछु मधेसी नेताहरु मधेसको माँगलाई संबिधानमा सुनिश्चित गर्न एकदम तनमनधनले लागि परिरहेका छन । यो कुराको प्रमाणको रुपमा संबिधान संशोधन प्रस्ताव टेबल भएको छ । त्यसले पनि स्पष्ट पार्छ तर्सथ भ्रामक समाचार प्रति नलाग्न मधेसी समुदाय र वीरगंजवासीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
Previous articleवीरगन्जमा २३ औं आदिवासी जनजाति दिवस मनाईयो
Next article६ बर्स बालक आफ्नै घर पछाडि रहेको खाल्टोमा डुबेर मृत्यु